राजधानी मस्त निदाउँदा जागेका भगवानका 'प्रिय' बोलबम, हेर्नुहोस् १० तस्विर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
राजधानी मस्त निदाउँदा जागेका भगवानका 'प्रिय' बोलबम, हेर्नुहोस् १० तस्विर
, २१ श्रावण २०७५
शब्द/तस्विर: आर्यन धिमाल
काठमाडौँ। रातको दुई बजे। सुनसान अनि अध्यारो सडक। सोमबार चावहिलदेखि सुन्दरीजल जाने सडक वरपरका बासिन्दा मस्त निन्द्रामा थिए। अध्यारो रातमा सडकमा पहेंला वस्त्र पहिरिएका मानिस देखिए।
मौसम झरीकै भएकोले होला केही क्षणमै सिमसिम हुँदै निथ्रुक्क भिजाउने पानी दर्किन थाल्यो। तैपनि उनीहरु भने हातमा सानो बट्टामा पानी लिई खाली खुट्टा हिडिरहेका थिए र भनिरहेका थिए, बोलबम बोलबम...।
उनीहरु बोलमब तिर्थयात्री थिए। जो सुन्दरीजलबाट पानी ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउन त्यसतर्फ पाइला लम्क्याइरहेका थिए। साउनको तेस्रो सोमबार आज चावहिल–सुन्दरीजल सम्मको सडकभरी बोलबम तिर्थयात्रीहरु लस्कर लगाएर हिडिरहेका थिए।
साउन महिनाको आकर्षणका रुपमा रहने बोलबम साउनको पहिलो सोमबारबाट सुरु हुन्छ। तेस्रो सोमबारको दिन यसलाई अझ विशेष यात्राका रुपमा लिइन्छ। त्यसैले पनि आज साउनको तेस्रो सोमबार सुन्दरीजलमा शिवभक्तहरुको उल्लेखनिय सहभागिता थियो।
सुन्दरीजलबाट ल्याएको जल पशुपतिलगायत शिवालयमा चढाउँदा पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रही आएको छ।